Miyaad i tusi kartaa sida loo dhamaystiro sharraxaadda Amazon ee badeecada?
Qaar badan oo suuqa ka mid ah ayaa aaminsan in sheygaaga uu si guul leh u helay macaamiisha firfircoon ee firfircoon, wax walba oo ku saabsan sharraxaadda Amazon ee SEO waa in horeyba loo meeleeyaa. Laakiin nasiib daro, waxay yihiin kuwo aad u xun. Dabcan, haddii aad ka shaqeyneysid liiska alaabtaada si aad uga dhigto mid si fiican loo filayo iyo in badan oo la raadin karo oo loogu talagalay dadka isticmaala - waxaad u maleyneysaa inaad horey u ahaan jirtay inaad iibiso iibinta halkaa. Hase yeeshee, wax walbaa waa sida SEO-ga dhaqameedka ah, dejinta xidhiidhka si loo soo jiito tirada sii kordheysa ee macaamiisha mustaqbalku waa mid fiican, laakiin hubaal kuma filna inaad ku noolaato tartanka suuqa tartanka. Oo halkan waa dhab ah marka sharaxaad Amazon wax soo saarka SEO yimaado ciyaaro! Hoos waxaan kuugu soo socdaa si aan kuu tuso sida loo sameeyo sharraxaad dhab ah oo fiiro gaar ah oo kufilan oo kaliya oo kuugu adeegaya inaad soo jiidato dad badan oo soo booqda liiska alaabtaada.
Amazon Product Description SEO - Talooyin iyo Qalab
Tallaabada Koowaad: Title Tags
Iyadoo inta badan ee tags cinwaanka (tusaale ahaan blogs) waxay leeyihiin fursado xadidan oo keliya in la aqristo ereyada muhiimka ah ee cinwaankaaga, Amazon wax soo saarka SEO wuxuu albaabka u furayaa dhammaan 500 oo xaraf. Sidaas darteed, qolkaa oo aad u weyn, waxaad xor u tahay inaad isticmaasho illaa 500 oo marmarka qaarkood u dhiganta ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah. Waxay micnaheedu tahay in aysan jirin wax dhib ah oo ku haboon in lagu dhejiyo mid kasta oo la isku daro oo la isku daro.
Tallaabada Labaad: Ku Qaybinta Qodobka Waxyaabaha
Dhammaan qeybaha wax soo saarka ee Amazon, alaabooyinka waxaa lagu dhejin karaa magaallo loo oggol yahay in ay yimaadaan ilaa 200 xaraf oo ay ku jiraan meelaha. Nasiib darro, ma jiro sharci gaar ah oo halkaas ka jira. Taasi waa sababta kaliya ee aad sameyn kartid waa in aad sameysid cilmi baaris tartiib tartiib ah oo aad qabatid amarka ugu fiican ee waxqabadka si gaar ah loogu talagalay qaybta alaabtaada. Waxaan kugula talineynaa in aad tijaabiso Jungle Scout qalabka shabakadda si uu kuu caawiyo taas. Sidaa daraadeed, ha iloobin in erey kasta oo sheyga ah ee alaabta waxsoosaarku waa in lagu dhameeystiraa, tirooyinka oo idil waa in lagu qoro tirooyinka kaliya.
Talaabada Saddexaad: Nadiifinta iyo Ka tirtirida liistada Baaqyada
Qofkasta wuu jecel yahay inuu helo dhammaan macluumaadka loo baahan yahay oo la muujiyey liis nadiif ah oo cad oo ku qoran qodobbo qodob. Ammaakaha Amazon maaha kuwo ka baxsan xeerkan. Taasi waa sababta aad uhesho labad-kontarool si aad u hubiso in xabbadahaada ay soo bandhigaan dhammaan sifooyinka wax soo saarka ee aad u bixiso iibka qaab isku dhafan iyo qaab dabacsan. Si kale haddii loo dhigo, wax kasta oo ku jira sharaxaada rasmiga ah waa inuu ahaadaa mid kooban laakiin wali si buuxda u wargelinaysa si uu u daboolo muuqaalka guud ee guud ee muuqaalka kaliya.
Talaabada Afaraad: Codsiyada Waxqabadka (CTAs)
Dabcan, waa inaadan waligaa haysan liistada alaabadaada oo aad u badan oo wicitaano ficil ah oo furan oo ficil ah, sida "hada iibsasho", "ugu fiican heshiis ", iwm. Haddii aadan rabin inay u ekaadaan sida spam. Si kastaba ha noqotee, tixgelin inaad ku duudduubto liiskaaga qaar ka mid ah CTA-yada waxtar leh ee loogu talagalay in ay hagto macaamiisha aan horumarineed u dhaqaaqin cashuurta kama dambaysta ah
Tallaabada shanaad: Sawirada wanaagsan ee darawaliintaada iibiya
Waxay u egtahay mid aan maskax lahayn, laakiin maalmahaas hore markii aad noqon kartid iibiye ku guuleysta Amazon oo kaliya hal sawir oo sahlan liiska alaabtu waa la tagay. Waxaan loola jeedaa inaad udirto martidaada aragtida buuxda ee sheygaaga iibka - ka muujinta xaglaha kala duwan iyo bixinta fursadaha qumman ee tayada leh si loo eego xitaa faahfaahinta tani. Ka dib oo dhan, haysashada fiidiyo wadaag ah oo soo bandhigay alaabtaada ficilka ayaa si siman u faa'iideysanaysa ma aha oo kaliya waayo-aragnimo user wanaagsan, laakiin dadaalkaaga guud ee Amazon wax soo saarka SEO Source .